Mapisarema 147 - Bhaibheri Dzvene [Shona Bible 2009]
Hareruya. Nokuti zvakanaka kuti Mwari wedu aimbirwe nziyo dzokurumbidza; Zvinofadza, uye kurumbidza kwakafanira.
Jehovha anovaka Jerusaremu; Anounganidza vakadzingwa vaIsiraeri.
Anoporesa vane moyo yakaputsika, Anosunga mavanga avo.
Anotara kuwanda kwenyeredzi; Anodzipa dzose mazita adzo.
Ishe wedu mukuru, anesimba guru; Njere dzake hadziperi.
Jehovha anobatsira vanyoro;
Imbirai Jehovha muchimuvonga, Imbirai Mwari wedu nziyo dzokurumbidza nembira;
Iye anofukidza denga namakore, Anogadzirira pasi mvura, Anomeresa uswa pamakomo.
Anopa zvipfuwo zvokudya zvazvo, Navana vamakunguvo, anochema.
Haafadzwi nesimba rebhiza; Haafariri makumbo omurume.
Jehovha anofara navanomutya, Navanotarira ngoni dzake.
Rumbidza Jehovha, iwe Jerusaremu; Rumbidza Mwari wako, iwe Ziyoni.
Nokuti wakasimbisa mazariro amasuo ako; Akaropafadza vana vako mukati mako.
Anoisa rugare panyika yako; Anokugutisa nezviyo zvakaisvonaka.
Anotuma mirairo yake panyika; Shoko rake rinomhanya kwazvo.
Anopa vanhu chando samakushe amakwai, Anoparadzira chando samadota.
Anokanda chimvuramabwe chake sezvimedu; Ndianiko angamira pachando chake?
Anotuma shoko rake, ndokuzvinyausa; Anovhuvhutisa mhepo yake mvura ndokuyerera.
Anozivisa Jakobho shoko rake, Nalsiraeri mitemo yake nezvaakatonga.
Haana kutongoitira rumwe rudzi saizvozvo; Kana zviri zvaakatonga, havana kuzviziva. Hareruya!